Nahoana no betsaka ny horohoron-tany any Granada? Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao | Meteorolojia tambajotra
Portillo Alemanina | 17/05/2022 10:00 | Haibolantany
Faritany misy horohorontany maro i Granada. Na dia tsy dia horohoron-tany avo loatra sy mampidi-doza aza izy ireo, dia tena miverimberina. Midika izany rehetra izany fa tsy maintsy mianatra bebe kokoa momba an’io faritry ny Saikinosy Iberika io ny mpahay siansa sy ny mety ho vokatry ny horohorontany maro be. manontany tena ny maro nahoana no betsaka ny horohorontany ao Granada.
Noho izany antony izany dia hanokana ity lahatsoratra ity izahay hilaza aminao amin'ny antsipiriany ny antony mahatonga ny horohoron-tany be dia be ao Granada sy ny vokatr'izany.
1 Nahoana no betsaka ny horohoron-tany any Granada?
2 Inona no atao hoe andiam-pandrosoana
3 Horohorontany amin'ny lesoka fohy
4 Niomana hiatrika horohoron-tany ny Junta de Andalucía
5 Nahoana no misy horohoron-tany be dia be ao Granada
Ara-dalàna raha mihovotrovotra kely sy miverimberina ny Tany ao amin'ny Basin Granada, iray amin'ireo faritra misy horohoron-tany ambony indrindra ao amin'ny saikinosy. Ny horohoron-tany dia tsapa tany amin'ny tanànan'i Granada toa an'i Atarfe, Santa Fe na Vegas del Genil izy ireo dia noho ny horohorontany maromaro izay nanomboka tamin'ny fiandohan'ny volana Desambra ary naverina naverina tamin'ny volana Janoary.
Nanazava i Ana Crespo Blanc, mpampianatra géodinamika ao amin’ny Oniversiten’i Granada sady manam-pahaizana momba ny horohoron-tany, fa misy ifandraisany amin’ny halavan’ny lesoka ny halehiben’ilay horohorontany. any Granada dia 20 na 25 kilometatra monja, noho izany dia tsy azo inoana fa hisy fahasimbana mahery vaika kokoa noho ny horohorontany toy ireo mety hitranga any San Francisco (Etazonia).
Ny antony mahatonga ny hetsika seismika amin'izao fotoana izao dia ny fifandonana eo amin'ny takelaka tektonika Afrikana sy Iberiana. “Eo amin'ny sisin-tanin'ny takelaka isika izay mihetsika 5 milimetatra isan-taona, ary mety hiteraka horohoron-tany miverimberina izany fiovana izany”, hoy i Crespo.
Inona no atao hoe andiam-pandrosoana
Io fihetsehan'ny takelaka miadana io dia mety hiteraka horohoron-tany amin'ny habeny samihafa, fantatra amin'ny anarana hoe andiam-panjonoana, any amin'ny faritra akaiky.
Nanamarika toy izao i Manuel Regueiro, dekan’ny Sekoly Momba ny Jeolojia: “Ny fampihenana ny fihenjanana mitranga amin’ny lesoka, izay triatra eo amin’ny vatolampy, rehefa mihetsika ny olona iray dia miteraka rojo, ary mihetsiketsika avokoa izy rehetra ary miteraka lesoka tsirairay.” Araka ny filazan'ny mpikaroka, saika aotra ny halalin'ny horohorontany farany, ary ny hamafin'izany dia nampitombo ny fahamalinana ara-tsosialy satria, raha jerena ivelany, dia hitan'ny olom-pirenena tsara kokoa izany.
Raha lalina kokoa ny ivon'ny horohorontany, na mahery kokoa aza, dia hihena ny onja ary tsy ho tsapa eny ambonin'ny tany. Tsarovy avy amin'ny IGN fa ny horohorontany tamin'ny 2010 dia lehibe noho ny halehiben'ny halehiben'izao fotoana izao (6,2 amin'ny maridrefy Richter) saingy, satria nihalalina kokoa ilay izy, dia tsy dia nahery vaika loatra.
Vokany, horohoron-tany mahatratra 40 no voarakitra androany maraina tao Granada ary tsapa tany amin'ny faritany Andaloziana 6, izay nitranga tao anatin'ny adiny telo ny 30 tamin'ireo. 4,3 sy 4,2 ny maridrefy mahery vaika indrindra, misy ivon-toeram-piompiana any Santa Fe. Nanaitra ny mponin’i Granada ny fiantraikan’ny horohorontany, izay na dia efa zatra tamin’ny horohoron-tany aza, dia nahalany azy ireo omaly alina.
Horohorontany amin'ny lesoka fohy
"Ny horohoron-tany eto dia eo amin'ny tsipika somary fohy," hoy izy nanazava, ary nampiany fa miankina amin'ny toerana misy ny trano ihany koa ny fahatsapana. Any amin'ny faritra be vato dia tsy dia miharihary loatra ilay tranga, ary any amin'ny faritr'i Vega, izay misy an'i Santa Fe na Atarfe, dia mihamatanjaka satria ny tany ambanin'ny tany dia tsy mafy orina.
Misy fiantraikany amin'ny fiantraikan'ny horohoron-tany koa ny halaliny. Ny maripana 3,1 degre voarakitra manodidina ny mitataovovonana ny talata dia 5km miala fotsiny: « Nahatsapa ny mpiara-monina fa ara-dalàna izany ary betsaka kokoa ny any amin’io faritra io.
Jesús Galindo, mpampianatra jeodinamika ao amin'ny Oniversiten'i Granada, dia nangataka famatsiam-bola bebe kokoa ahafahana manangona ny angon-drakitra ilaina haminavina ity karazana hetsika ity. “Efa nanana ny fitaovana izahay, saingy nila famatsiam-bola izahay”, hoy ny fampahatsiahiviny, satria nipoitra ny lesoka maherin’ny roapolo kilometatra tao Granada, ka nahatonga ity karazana hetsika ity tany amin’ny faritra hafa teo akaiky teo.
Amin’izany fomba izany, dia maminany izy fa “hisy andiany hafa mitovy amin’izany amin’ny ho avy, toy ny teo aloha”. Ny fifandraisan'i Eurasia sy Afrika dia mahatonga ny faritry ny Tendrombohitra Betik, rakotry ny ranomasina 10 tapitrisa taona lasa izay, ny ambiny dia atsangana mba hisongadina kokoa ny tany. “Betsaka ny lesoka kely sy antonony ao amin'ny faritr'i Vega, izay toerana ifantohan'ny angovo. Mahay mamokatra horohoron-tany lehibe miampy na minus 5».
Na ahoana na ahoana, “Tsara lavitra noho ny taloha ny tranobe ankehitriny.. Izy ireo dia rafitra manohitra. Ny trim na cladding ny façade dia ho esorina. "
Niomana hiatrika horohoron-tany ny Junta de Andalucía
Elías Bendodo, Minisitry ny Fiadidiana, ny Fitantanam-panjakana ary ny Atitany, dia nitatitra ny alarobia teo fa ny vaomiera dia manao "fanaraha-maso tsy tapaka" amin'ireo andiam-baravarankely izay misy fiantraikany amin'i Granada sy ny faritra metropolitanina, raha toa ka ilaina izany. ny dingana fanombohana ny drafi-pandreseny ho an'ny risika horohoron-tany dia ao anatin'ny dingana mialoha ny hamehana, satria araka ny angon-drakitra manam-pahaizana dia mety hiitatra mandritra ny fotoana maharitra ny andian-horohorontany.
Nandritra ny fitsidihana ny Foibem-pandrindrana vonjy taitra 112 ao amin'ny faritanin'i Granada, dia nitsidika ny Institut Andalusia momba ny Geofizika sy ny fisorohana ny loza mitatao amin'ny horohoron-tany koa i Bondodo ary nanatri-maso mivantana ny andiam-pandraharahana mifandraika amin'ny horohorontany nitranga tany amin'ny faritr'i Vega Granada.
Nilaza i Bondodo fa azony ny "tahotra sy ny tsy fahatokisana ankapobeny" an'ny Granada amin'ny fotoana toy ny ankehitriny, ary nampiany fa "mivonona hiatrika ireo loza ireo i Andalusia satria manana serivisy vonjy maika eo amin'ny lohalaharana amin'ny firenena izahay, azo atao ny miantoka ny fiarovana sy miditra an-tsehatra amin'ny fampiasana protocols manokana amin'ny fotoana rehetra. "
Nahoana no misy horohoron-tany be dia be ao Granada
Ny faritra deformation dia miitatra any atsimoatsinanan'ny Ranomasina Alberan, izay nitrangan'ny horohorontany lehibe tamin'ny taona 2016, ka olona 20 mahery no naratra tao Melilla. Manaraka, tohizo ny Al Houcemas any Maraoka, izay niaina horohoron-tany nahatsiravina ihany koa tamin'ny 2004.
Ny sasany amin'ireo horohoron-tany lehibe indrindra voarakitra ao amin'ny Saikinosy Iberiana dia nitranga tany akaikin'i Granada. Toy izany no nitranga tamin’ny Arenas del Rey tamin’ny 1884, izay namono olona maherin’ny 800 ary nandrava trano an’arivony; Albolote, tamin'ny 1956, nahafatesana 11, na Dúrcal, iray amin'ireo firaketana mahery vaika indrindra voarakitra teto amin'ny firenentsika, izay 7.8 ny habeny, saingy tsy niteraka fahasimbana firy izany satria 650 kilometatra no nitrangan’izany.
Talohan’ireny horohoron-tany ireny, tamin’ny 1431, dia nisy horohoron-tany tamin’ny maridrefy 6,7 tamin’ny maridrefy 4,5 nanozongozona an’i Granada, izay fanjakana silamo tamin’izany fotoana izany, ary niteraka fahasimbana goavana teo amin’ny Alhambra. Ny horohorontany tamin'ny maridrefy 40 tamin'ny Talata no lehibe indrindra tao anatin'ny 1964 taona, ary tsy maintsy niverina tany amin'ny 4,7 ianao raha te hahita XNUMX hafa amin'ny maridrefy Richter.
Manantena aho fa amin'ny alalan'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny antony mahatonga ny horohorontany be dia be ao Granada ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Haibolantany » Nahoana no betsaka ny horohoron-tany any Granada?